Villa Soomaaliya oo Ka Hadashay Iscasilaadii Guulwade. – Goobjoog News
Madaxtooyada Jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka warbixisay iscasilaadii uu sameeyey Danjire Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen (Guulwade) oo xubin ka ahaa guddiga dab- u heshiisiinta wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland.
Warsaxaafadeed ka soo baxay Madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Danjire Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen (Guulwade ) in Villa Soomaalia ay aad uga xun tahay waxaa ay in isigana ay gooni u tahay ayna ka turjumaynin mowqifka dowladda Sooaamiya ayaa lagu yiri.
“Madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay caddeynaysaa in Danjire Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen (Guulwade) uu iska casilay xubinnimadii Guddiga Qaran ee Dhab-u-heshiisiinta iyo Wadahadallada Dowladda Federaalka iyo Soomaaliland.
Waxaan aad uga xunnahay hadalka danjiraha, annaga oo adkeynayna inuu yahay mid isaga u gaar ah oo aan ka turjumeynin mowqifka Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kan Guddiga uu ka tirsanaa.”